Umncintiswano Wesibili Wokudala Amahlaya Kazwelonke | Izincwadi Zamanje
«El Amahlaya ngokuhlanganyela ukukhumbula iminyaka eyishumi nesithupha yokusungulwa kwayo nokuletha ku Ingqungquthela ye-XI Almería yamahlaya, emsebenzini wawo wokusiza ukwenziwa kwamahlaya endabuko, unquma ukugcina, njalo ngonyaka, a Umklomelo wokwakhiwa kwamahlaya.
Inhloso yalo mncintiswano ukukhuthaza ukwenziwa kwemisebenzi yamahlaya nokukhuthaza umsebenzi wobuciko wabaculi abasha ngokubona, ukukhuphula, ukushicilela nokusabalalisa okulandelayo kwemisebenzi ekhishiwe.
Ukubamba iqhaza kuvulekele abaculi be-amateur abavela kuwo wonke umhlaba, okuwukuphela kwesimo ukukhiqizwa kweskripthi ngolimi lwaseSpain.
Ungabamba iqhaza ngakunye noma ngokuhlanganyela (esimweni sokubamba iqhaza ngokuhlanganyela, umsebenzi owethulwayo uzofakwa kusigaba somhlanganyeli omdala kunabo bonke), futhi umklomelo uzohlukaniswa ngama-aliquots kubahlanganyeli.
Bonke labo ababambiqhaza abangadluli eminyakeni eyi-16 ngonyaka ka-2008 bazoba yingxenye yalesi sigaba.
Kulesi sigaba, bonke labo bantu abaneminyaka engaphezu kwengu-16 ubudala ngonyaka ka-2008 bazobamba iqhaza.
Ingqikithi imahhala - inqobo nje uma ingaphuli amalungelo abantu - futhi abalingiswa kumele babe ngabokuqala, bokudalwa kwabo futhi bangashicilelwa.
Umsebenzi owethulwayo kumele ube ngowangempela futhi ungashicilelwa futhi awukaze unikezwe phambilini komunye umncintiswano.
-Isandiso ngamakhasi ama-4 kanye nekhava.
-Imisebenzi ethunyelwe kumele yenziwe ngombala omnyama nomhlophe.
-Ifanele yethulwe ngokuma mpo ngefomethi ye-Din-A4 ohlangothini olulodwa kuphela.
-Le nqubo imahhala inqobo nje uma ingazanywa kabusha ngokuphelele uma kungomunye wemisebenzi yokuwina.
-Ikhophi yomsebenzi izokwethulwa ephepheni bese enye ikhophi isekelwa nge-digital (CD, DVD ...) enesixazululo samaphikseli ayi-150 / intshi
-Imisebenzi akumele isayinwe noma ikhombise igama lomlobi futhi amakhasi kufanele afakwe izinombolo ezifanele.
-Imvilophu evaliwe izonanyathiselwa imininingwane yomuntu obambe iqhaza ngaphakathi (igama, isibongo, iminyaka, ikheli, inombolo yocingo kanye ne-imeyili).
-Ngaphandle kwemvilophu, umhlanganyeli ngamunye uzobhala igama-mbumbulu elizobhalwa ngemuva kwekhasi ngalinye elihanjisiwe.
-Ukudilivwa kungenziwa ngesandla noma ngeposi eliqinisekisiwe kuleli kheli elilandelayo:
Ibhokisi le-PO, 338
-Umnqamulajuqu wokulethwa ngu-Okthoba 30, 2008. Yonke imisebenzi ethunyelwe ngeposi usuku lwayo lokumaka olungadluli umnqamulajuqu wokulethwa izokwamukelwa.
-Ngaphakathi kwesigaba ngasinye kuzoba nowinile nabathathu abazongena kowamanqamu.
Ozonqoba uzoba nomklomelo wemali engama-400 Euro, kanye nenqwaba yezincwadi ezivela eqenjini likaDe Tebeos, ngenani elilingana nama-100 Euro.
Umuntu ngamunye kwabathathu abazongena kowamanqamu uzoba nenqwaba yezincwadi ezivela eqenjini likaDe Tebeos.
Ophumelele uzothola umklomelo wemali engama-euro angama-600 kanye neqoqo lezincwadi ezivela kuqembu elihlangene uDe Tebeos, ngenani elilingana nama-euro angama-200.
Umuntu ngamunye kwabathathu abazongena kowamanqamu uzoba nenqwaba yezincwadi ezivela kwiTebeos Collective.
I-IEA (Isikhungo Sezifundo ze-Almeria) izonikela ngenqwaba yokushicilelwa ngababhali nezifundo ezivela e-Almería emsebenzini omuhle ongabonakala e-Almeria nasesifundazweni; okungukuthi, umbhali wemvelaphi enjalo.
-Ijaji lizokwakhiwa ngabantu abafanelekile, ezingeni likazwelonke, emhlabeni wamahlaya nemifanekiso, ngumhleli weDe Tebeos kanye nelungu le-Instituto de Estudios Almerienses (IEA), uMnyango Wezobuciko kanye Nezincwadi.
-Izinqumo zeJury azithinteki.
-I-Jury ingamemezela ukuthi yimiphi imiklomelo engenalutho uma ibona kufanelekile futhi ixazulule zonke izici ezinganikwanga kulezi zikhungo ngokubona kwayo.
Ukubheka: - Yomibili le misebenzi ewinile kanye neyamanqamu ayisithupha izoshicilelwa nguDeTebeos ngevolumu yokuhlanganisa.»
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Imincintiswano Nemiklomelo » Umncintiswano wesibili kazwelonke wokudalwa kwamahlaya
Sawubona, igama lami nginguPedro, ngivela e-Argentina. Ngibambe iqhaza emncintiswaneni wamahlaya wesi-2 e-Almería. Ngabe unawo umbono wokuthi abawinile bashicilelwa kuphi futhi nini?